Condolences for the deaths caused by Hpakant jade mine collapse – Arakan Front Party
July 3, 2020 July 3, 2020 office_hq_afp
Condolences for the deaths caused by Hpakant jade mine collapse
Date – July 3, 2020
Mine collapse in Hpakant of Kachin state on 2nd July has caused the deaths of at least about 170 people, and an unknown number of people are feared missing. At least about 70 Arakanese people were among the unfortunate who lost their lives during this happenstance. We are deeply saddened and our hearts go out to the deceased and to their bereaved families.
This fatal accident isapart of the whole system failure, which can be likened toasinking ship. We the Arakanese can escape these unfortunate events only when our self-determination is in our hands.
ဖားကန့် မြေမြုပ် သေဆုံးရမှုများအတွက် ဝမ်းနည်းကြောင်း စကားလွှာ
ရက်စွဲ – ၂၀၂၀ ဇူလိုင်လ (၃) ရက်
ဇွန်လ နှစ်ရက်နေ့ ဖားကန့်မြို့နယ်အတွင်း မြေပြိုကျမှုကြောင့် အနည်းဆုံး လူ (၁၇၀)ခန့် သေဆုံးလျက် အရေအတွက် မသိရသေးသည့် လူများစွာတို့ ပျောက်ဆုံးနေကြလျက်ရှိပါသည်။ ဤဖြစ်ရပ်ဆိုးအတွင်း အသက်ဆုံးရှုံးခဲ့ရသူများအနက် ရခိုင်လူမျိုး အနည်းဆုံး ခုနစ်ဆယ်ခန့်တို့ ပါဝင်သေဆုံးခဲ့ကြရပါသည်။ သေဆုံးရသူများနှင့် ၎င်းတို့၏ မိသားစုတို့အတွက် ကျွန်ုပ်တို့ များစွာ စိတ်နှလုံးညိုးနွမ်း ဝမ်းနည်းခြင်း ဖြစ်ကြရပါသည်။
ဤဖြစ်ရပ်ဆိုးမှာ နစ်မြုပ်သင်္ဘောပမာ ပျက်စီးခြင်းငါးပါးတိုင်နေသော စနစ်ဆိုးတစ်ရပ်၏ အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုအဖြစ် ဖြစ်ပျက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါသည်။ မိမိတို့၏ ကိုယ်ပိုင်ပြဋ္ဌာန်းပိုင်ခွင့် မိမိတို့လက်ဝယ်သို့ ရောက်ရှိမှသာ ဤအဖြစ်ဆိုးများမှ လွတ်မြောက်နိုင်ကြမည် ဖြစ်ပါသည်။
Previous မြေမြုပ်သေဆုံးရသူများအတွက် မေတ္တာစာ
Next ရခိုင့်ဦးဆောင်ပါတီ (AFP) ကိုယ်စားပြု လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းများ